UNWTO dia mandefa ny fifaninananan'ny mpandeha mba hampiroborobo ny faharetana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » UNWTO dia mandefa ny fifaninananan'ny mpandeha mba hampiroborobo ny faharetana
Miaraka amin'ny tanjona hampiroboroboana ny dia mahomby, ny United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) dia nanangana fifaninanana mpizahatany alohan'ny Andro maneran-tany fizahan-tany. Ny hetsika dia ampahany amin'ny fampielezan-kevitra 'Travel.Enjoy.Respect' izay natao tao anatin'ny Taona Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany maharitra ho an'ny fampandrosoana 2017. Fitsangatsanganana iray volana manerana izao tontolo izao mitsidika ny fizahan-tany maharitra fizahan-tany no loka izay homena ny mpandresy ny fifaninanana.
“Ny lahasa rehetra ary ny mpandeha dia manana andraikitra lehibe amin'ny fananganana sehatra fizahan-tany maharitra. Alao an-tsaina ny fiatraikan'ny hetsika kely iray ampitomboina an-tapitrisany ”, hoy i Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO. "Tianay ny hanome aingam-panahy ny mpandeha rehetra mba ho fiovana tian'izy ireo ho hitan'izao tontolo izao." Ny mpandray anjara amin'ny fifaninanana dia asaina hizara ny zavatra niainany tamin'ny dia www.travelenjoyrespect.org ary hazavao ny antony tokony hisafidianana azy ireo hisolo tena ny "mpandeha tompon'andraikitra" manerantany.
Ity dia ity dia hanomboka ao amin'ny foiben'ny UNWTO any Madrid, miaraka amina lanonana 'fanendrena' ofisialy miaraka amin'ny Sekretera jeneraly, ary hifarana amin'ny lanonana famaranana ny Taom-baovao Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany maharitra ho an'ny fampandrosoana 2017 ao Genève, Suisse, izay misy ny mpiara-miasa avy amin'ny Hiray hina ny vondron-tany fizahan-tany sy ny fianakaviana UN.
Ny mpandresy manerana ny dia manerantany dia tohanan'ny Jereo izao tontolo izao, vondrona fitsangatsanganana an-tsehatra manolotra hetsika sy traikefa marobe miaraka amin'ny fanoloran-tena amin'ny fitsangatsanganana tompon'andraikitra sy ny tendron'ny fanahy Discover. Toerana anisan'izany Kolombia, Germany, Meksika, Emirà Arabo Mitambatra an'ny Ras al-Khaimah ary ny faritra Léman any Suisse dia nanolo-tena hampiantrano ny mpandresy ary hanampy azy ireo hahita fomba fanao fizahan-tany tompon'andraikitra sy maharitra.
Ny fifaninanana dia iray amin'ireo hetsiky ny hetsika 'Travel.Enjoy.Respect' izay natombok'i UNWTO hanentanana ny fahafantarana ny lanja sy ny anjara biriky azon'ny fizahan-tany maharitra mivoatra amin'ny fampandrosoana, ary ny fampidirana ireo mpizahatany mba hahatonga ny sehatra ho lasa fanovana miabo. .